Indiana Mpianatra Voahilikilika Sy Nampijaliana Rehefa Nitatitra Ny Herisetra Ara-nofo Nihatra Taminy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Janoary 2016 5:44 GMT
Pikantsary tamin'ny fonon'ny e-book maimaim-poana, “Herisetra Ara-nofo tao amin'ny Toeram-piasana ao India: Andeha Hiara-hampitsahatra Izany” avy amin'ny LawSikho.com (Tsindrio ny sary raha hamaky ny e-book ao amin'ny Slideshare)
“Tahaka an'Andriamanitra ny herisetra ara-nofo, feno azy eny rehetra eny,” nilaza am-pamazivaziana momba ny olana maharitra amin'ny fanararaotana ny vehivavy ao India ny vehivavy Indiana mpikatroka iray.
Ary tsy mijanona amin'ny fanombohana herisetra izany. Ny zava-nitranga vao haingana tao amin'ny Satyajit Ray Film and Television Institute (SRFTI), ivom-pampianarana horonantsarimihetsika sy fahitalavitra ao Kolkata, Bengal andrefana, India, dia mampiseho fa mety manokatra varavaran'ny fanohintohinana bebe kokoa indray ho an'ny lasibatra ny fomba filazana fanoherana ny fanararaotana.
Tamin'ny volana lasa, mpanabe mpikambana telo ao amin'ny SRFTI no naato taorian'ny fitarainana momba ny herisetra ara-nofo mahavoarohirohy azy ireo. Ny filazana dia natao tamin'ny novambra 2015 nandritra ny fihaonan'ny vehivavy mpianatra maro tamin'ny filohan'ny Komitin'ny Fitarainana Anatiny momba ny Herisetra Ara-nofo. Ny fiampangana dia ahitana mpanabe manala-baraka tena amin'ny mpianatra ao an-dakilasy sy manao fanehoan-kevitra momba ny natioran'ny fananahana. Mpampianatra iray hafa ihany koa no voampanga ho nanohana ny fanohintohinan'ny lehilahy mpianatra iray tamin'ireo vehivavy mpiara-mianatra taminy.
Nanambara ny mpianatra iray ao amin'ny SRFTI manoratra amin'ny alalan'ny solon'anarana Kunjila fa iray amin'ireo nitaraina izy ary niampanga ny mpampianatrany ho “manery azy hanao firaisana aminy”. Nofariparitany avy eo ny fomba nivadihan'ny mpianatra taminy taorian'ny famoahana ny mari-panondroana azy:
Manoratra ity lahatsoratra bilaogy ity aho mba hanome vaovao farany momba ny fivoarana niseho rehefa fantatra fa izaho no nitaraina nametraka ny fitarainana manohitra ny mpampianatra iray tao amin'ny SRFTI izay nanery ahy hanao firaisana aminy. Tamin'ny 25 Desambra 2015, niantso fivorian'ny tovovavy rehetra ao amin'ny ivom-pampianarana i Sri, izay noheveriko ho namana, ary mpianatra iray sokajy amiko. Nalefa tao amin'ny vondrona WhatsApp ny hafatra niantso ny mpikambana lehiben'ny SRFTI izay mpikambana amin'izany koa aho. Nanome ny rohy tamin'ny lahatsoratra bilaogiko sy ny tatitra tao amin'ny TOI (The Times of India) izy. Nanamarika tao amin'ny vondrona ny lehilahy iray hafa iray sokajy amiko fa “mahatsiravina” ny andinin-dalana farany amin'ny tatitra.
Ary niharatsy izany, raha nanoratra tamin'ny lahatsoratra bilaogy iray hafa izy tamin'ny 3 Janoary 2016:
Mandritra izany fotoana izany, tao amin'ny SRFTI, izay nisian'ny heloka bevava, nisahirana nanao antokon'olona niady tamiko ny olona. Ny olana voalohany, araka ny mahazatra, dia ny fanimbana ny lazan'ny ivom-pampianarana. Tao amin'ny haino aman-jery sosialy, namoaka lahatsoratra ireo tovovavy mpianatra vitsivitsy izay milaza fa tsy mbola nahatsapa izy ireo fa mampidi-doza ho an'ny vehivavy ny SRFTI. [..]
Mpianatra sasany teo aloha kosa nandray ireo lahatsoratra ireo toy ny fotoana mety tsara hitsarana ny toetrako sy nilazana fa nandainga aho. Nilaza ny iray fa “vehivavy ratsy tarehy” aho, ny iray hafa kosa niteny fa’ marary saina manana tantara fikasana hamono-tena” aho, lahatsoratra iray hafa avy amin'ny vehivavy mpianatra teo aloha nilaza fa azo antoka fa valifaty manokana izany. Mpianatra vehivavy iray hafa nilaza fa tranga mahazatra ny tovolahy miantso “tigra tigra’ indroa rehefa tsy nisy ny tigra izany.
“Matetika ekena ho fitondran-tena manafintohina ny herisetra tahaka izany”
Teo anelanelan'ny Aprily 2014 sy Aprily 2015, tranga herisetra ara-nofo 75 no voalaza fa nitranga tao anatin'ny ivom-pampianarana ambony manerana an'i India.
Mpitsara teo aloha Sujata Manohar ao amin'ny Fitsarana Tampony ao India nanazava nandritra ny seminera fa tsy misy lalàna mahomby ao India mba hiadiana amin'ny herisetra ara-nofo ao amin'ny toeram-piasana, ary mivelatra loatra ny torolalan’ ny Fitsarana Tampony ka azo adika amin'ny fomba maro. Hoy izy (tahiry pdf):
Iray amin'ireo sakana amin'ny famahana ity olana ity dia matetika tsy ankatoavina ho fitondran-tena manafintohina izay mety miteraka ratram-po aman-tsaina sy fahoriana ho an'ny niharam-boina ny herisetra tahaka izany. Tantara hafa ihany koa ny hoe hitarina ny halalin'ny herisetra ara-nofo; hany ka lazaina fa fikaotiana tsy mandratra sy tsy mampidi-doza ankehitriny ilay antsoina fa herisetra.
Tamin'ny lahatsoratra ho an'ny sehatra fanehoan-kevitra antserasera Daily O, Edmond Fernandes, Tale Jeneralin'ny Foibe Ho an'ny Fahasalamana sy ny Fandrosoana, Mangalore, sy i Homolata Borah, mpampianatra ambony mpikaroka ao amin'ny Foibe Ho an'ny Fikarohana ny Fampandrosoana Ara-paritra ao New Delhi, nilaza fa fotoana izao hanaovana fiovana :
Fotoana nahatonga ireo mpampianatra ambony mpikaroka sy ireo nahazo diplaoma niloa-peo momba izay loza mampahasorena, na izany fikasihana tsy sahaza, fanararaotana ara-nofo, fandrahonana na kolikoly, ampahafantatro avy hatrany ny olana, tsy any amin'ireo manampahefan'ny oniversite ihany fa any amin'ny polisy, ny fianakaviana sy ny namana ihany koa ka hanangana teritery maromaro ho an'ny meloka izany mba hoentina eo anatrehan'ny fitsarana sy tsy hamela ny tranga hivalona.
Fotoana nahitan-tsika maso ireo fanovana teny anivon'ny toeram-piasana ihany koa izao ary niantohana fa ny fampanantenana hiaro ny mpiasa vehivavy amin'ny herisetra ara-nofo dia nomena.
“Ny niharam-boina hatrany no voahilikilika”
Tao amin'ny Facebook, Gagan Judge nitsikera ny tsy fisian'ny fanohanana amin'ny zava-niainan'i Kunjila tao amin'ny SRFTI:
Gaga aho noho ilay mpianatra vehivavy ao amin'ny SRFTI tsy nahazo fanohanana avy amin'ny mpianatra namany. Samy ratsy sy adala avokoa ny sasany tamin'ireo foto-kevitra henoko tamin'ny mpianatra lahy sy vavy. Ny mampalahelo tamin'ny tranga herisetra ara-nofo dia ny nihatra tamin'ny niharam-boina taorian'ny fitarainany ary afaka nahita ireo fanehoan-kevitra mahazatra eto aho. “Avotra soa aman-tsara isika rehetra. Voatevateva ny toeram-pianarantsika!”. Tsy misy olona manevateva ny toeram-pianaranao ary tsara araka ny nolazainao fa tsy naninona ianao sy ny maro hafa. Izany no mbola mampitsangana ny toeram-pampianarana. Azo antoka foana ny fiarovana olona sasany saingy ahoana ny amin'ilay tovovavy iray niloa-bava nanohitra ny herisetra ara-nofo. Nahoana ianareo tovovavy no tsy manohana azy?
Subal Kr. naneho hevitra hoe:
Mihevitra marina tokoa ve ny rehetra fa handoto ny endriky ny SRFTI izao? Manao ahoana ny endriky ny SRFTI? Hatramin'ny naha-mpianatra sinema antsika, alohan'ny hitsambikinana sy hitsarana, farafaharatsiny, miandrasa ny fivoahan'ny marina. Satria tsy mandratra ilay tovovavy ihany ny fanehoan-kevitrao maloto fa hampatahotra ny fanahin'ny olon-kafa te hiloa-bava mikasika ny fijalian'izy ireo ihany koa.
Mpamokatra horonantsary fanadihadiana efa nahazo loka, Nishtha Jain, izay nitantana ny horonantsary fanadihadiana “Gulabi Gang” momba ireo vondrona mpikatroka vehivavy Indiana manohitra ny herisetra ara-nofo, niresaka momba ny lasitra roa samihafa tafiditra amin'ny raharaha tao amin'ny lahatsoratra tamin'ny Facebook iray:
Ny zava-misy dia tsy mahafantatra akory ny ankamaroan'ny vehivavy fa niharan'ny herisetra ara-nofo na noterena izy ireo, raisin'izy ireo ao anatin'ny «anjaran'» izy ireo izany. Tsy mitatitra momba ny herisetra ny ankamaroan'ny vehivavy ary lasa tsy manampy ny vehivavy hafa izany toe-javatra izany. Ny tenako manokana dia tsy nitatitra tranga maromaro tahaka izany, anisan'izany ireo nitranga tao amin'ny [Ivom-pampianarana Horonantsari-mihetsika sy Fahitalavitra]. Malahelo aho satria fantatro ankehitriny fa andiana mpanolana ireo lehilahy ireo. Mety misy «lisitra mpanolana» izay tokony haparitaky ny vehivavy ao mba ho fantatr'ireo mpianatra/mpiara-miasa/namana ny mpanolana. [..]
Mino aho fa mila mianatra mandray ny TSIA ny lehilahy Indiana. Ary mila milaza ny TSIA mafy kokoa sy mazava kokoa ny vehivavy. Tsy midika izany fa tsy misy ny fitoriana mamely ny lehilahy. Misy izany, saingy vitsy dia vitsy satria mila herim-po goavana ny vehivavy mba hametrahana fitarainana, na dia amin'izao taona 2016 izao aza. Ny lasibatra foana no voahilikilika, indrindra avy amin'ny fiarahamonina raha matetika mahazo famelan-keloka kosa ny lehilahy ary eken'ireo sakaizany/ vadiny/ fianakaviana / namana/ mpiara-miasa izany.